China Portable Ultrasonic transducer impedance analyzer Measuring Instrument for Param Manufacture and Factory | Qianrong
Ultrasonic transducer impedance analyzer Atụle Instrument maka oke
Portable, 8inch ihuenyo, Full ihuenyo mmetụ
Ihe niile, eserese
5s / otu ngafe （600ebe nyocha）
Mkpebi nke oge
10 ～ 40ndgree centigrade
Ultrasonic components analyzer QR520A usoro nke ngwaahịa maka ụdị dị iche iche nke ultrasonic ngwaọrụ maka ihe atụ, gụnyere piezoelectric ceramik, transducers, ultrasonic ihicha igwe, ultrasonic plastic ịgbado ọkụ igwe, mmiri n'okpuru osimiri now, magnetostrictive ihe, ultrasonic grinder, ultrasonic atomization, ultrasonic ihicha, agbanwe radar, ultrasonic sitere na, phacoemulsification, nhicha ultrasonic, ultrasonic moto, na ihe niile eji piezoelectric na ultrasonic ngwaọrụ na akụrụngwa.
1. Nnukwu ihuenyo, ihuenyo zuru oke na-emetụ aka, na-eme QR520A ma QR70A-P (nsụgharị kọmputa) ahụmịhe ọrụ, ọ nweghịkwa ihe na-agwụ ike na-enwe mmetụta nke ịrụ ọrụ kọmputa.
2. Relies na ọhụrụ dị ike ARM processor data ikike ikike, QR520A n'ihe ziri ezi bụ nnọọ elu karịa QR70A-D (na ngosipụta version), nwere ike nweta QR70A-P (kọmputa version) larịị.
3. Ihuenyo mmetụ zuru oke na-emekwu omume enyi, ọ dịghịzi mkpa QR70A-D (nke ngosi nke aka ya) ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke bọtịnụ anụ ahụ, yabụ, ngwa ọrụ na-aghọ ihe dị oke nfe, nha mmepụta ahụ pere mpe, na-adị ọkụ ma na-ebugharị.
4. Ijikọ kọmputa iji rụọ ọrụ dị ka QR70V-P. Akụrụngwa ahụ dakọtara nke ọma, onye ọrụ amakwaghị arụ ọrụ ngwanrọ.
1. Mahadum Tsinghua na Mahadum Sayensị Sayensị Sayensị nke Acoustics jikọrọ aka rụpụta teknụzụ.
2. Ebe ọ bụ na 2001, usoro QR60A / 70A anyị nke ahịa na ahịa kemgbe afọ 15, ọtụtụ puku ndị ahịa na-eji ụlọ ọrụ ahụ, aghọwo ihe eziokwu nke usoro nyocha ụlọ ọrụ ultrasound.
3. N'ime afọ 15 gara aga, ihe karịrị kọleji na mahadum 200 na-eji ngwá ọrụ anyị, n'ihi na ha na-enwekarị ihe karịrị 20,000 esite na ngwa Agilent, 4294A. A nwaleala ngwa anyị ọtụtụ oge site na ngwa Agilent. Ọ na-apụta na nsonaazụ nke ngwa anyị nwere ntụkwasị obi kpamkpam.
4. Ọtụtụ ndị German na US ultrasonic ule ụlọ ọrụ ejiriwo ngwa anyị dị ka ngwa ule. Ngwá ọrụ ahụ bụ isi ihe na-achịkwa njikwa mma. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ ngwá ọrụ ndị China. Anyị ga-enyerịrị ha dabere na ntụkwasị obi zuru oke.
Nke gara aga: 40Khz Ultrasonic Nano Spray Device with High Frequency Replacement Traditional Abụọ-mmiri Spraying
Osote: 20Khz Ultrasonic ahaziri ịgbado ọkụ Horn na Anodizing Ọgwụgwọ
3000W Hot-gbazee akara ịgbado ọkụ nke Plastic End C ...
20Khz Ultrasonic Rubber Cutting Device with 60m ...
High Frequency 35Khz 1000w Ultrasonic akara E ...